Achọrọ m n'ezie iji nyiwe gị ... Mana ... | Martech Zone
N’izu a, onye na-ere ahịa si n’elu ikpo okwu zutere m. Anyị na ụlọ ọrụ enweela mmekọrịta ma na-apụ apụ afọ ole na ole ugbu a. Ahụla m ngosi banyere otu esi eji sọftụwia ha; ha 've nwetara a ezigbo mfe ndebiri interface, na tọn mwekota ike. Ọ dị ka ikpo okwu na-ekwe nkwa.
Anyị chọrọ ka ramp ngwa anyị na-ebudata ngwa ngwa kemgbe Bluebridge rụrụ ọrụ dị egwu na ngwa ekwentị anyị. Anyị na-aga ichikọta ụfọdụ nnukwu onyinye, gụnyere ụfọdụ ngwa Apple, ego na ihe nrite ndị ọzọ.
Maka na anyị ga-etinye obere oge na mbọ n'azụ ahịhịa, anyị chọrọ ijide n'aka na anyị na-arụ ọrụ dị oke mma na ya. Ọ bụrụ na ị bụ ikpo okwu ebe ndị ọrụ na-agba ọsọ na-agba ọsọ, n'ezie ị nwere ike ịnye ụfọdụ ezi ihe atụ na usoro kachasị mma banyere etu esi amalite mkpọsa na-aga nke ọma. Ebe ọ bụ na ngwa ngwa mkpanaka dị n'etiti ọtụtụ nsachapụ n'ịntanetị, a ga m eche na enwere ụfọdụ ezigbo atụ sitere na ngwa ngwa ngwa ngwa na onye na-eweta ọrụ a.
Banyere m na ogbako ogbako anyị taa, ndị ahịa ire ere bidoro, "Ya mere, gịnị ka ị na-achọ iji nweta asọmpi asọmpi gị?" Iche - n'ihi na edere m ya tupu ịhazi oge a na ihe anyị chọrọ iji nweta. Achọrọ m ịtụle omume kachasị mma na-agba ọsọ na-agba ọsọ n'elu ikpo okwu ya iji rata ndị mmadụ ibudata ngwa mkpanaka anyị.
Ya mere, m na-emeghachi mkpa ahụ, ọ na - aza, "Ọfọn, anyị niile ka emere tupu ndebiri, yabụ ọ dịịrị gị mfe ịhazi mkpọsa ọ bụla ịchọrọ."
Ana m eme ka ọ mara na m maara nke ọma na m nwere ike ịhazi nsị ọ bụla mana ọ ga-amasị m… mana ihe m na-achọ bụ ụfọdụ ndụmọdụ, aghụghọ, na omume kacha mma iji mepee atụmatụ ahụ maka mkpọsa ahụ. Ekwesịrị m ịghọta ihe a ga-eme tupu m iwe iwe ikike maka ngwanrọ nke ga-eme ya.
Sọftụwia dị ka ndị na-enye ọrụ Biko Leba anya
Anyị dere n'oge na-adịbeghị anya banyere àgwà nke ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe na-achọ ahịa ha ndị nnọchi anya Maa amụma? Ọ bụghị a ngosi. Ọ na-egosi anyị na ị nwere nka iji nye m ozi m chọrọ iji wee merie ngwaahịa na ọrụ gị!
Ọ bụrụ na nzaghachi gị bụ "uhhh", apụla m.
Amaghị m ihe dị mkpa karịa mbọ ahịa ụlọ ọrụ ọ bụla. Anyị mepụtara akwụkwọ akụkọ na-acha ọcha maka onye ọ bụla n'ime ndị ahịa anyị iji gosipụta atụmanya ha na ndị ahịa otu esi eji ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha eme nke ọma. Nke a kwesịrị ịbụ nzọụkwụ mbụ na ụlọ ọrụ ọ bụla Ọbá akwụkwọ ọdịnaya!
Ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ ọcha, vidiyo na-akọwa, ma ọ bụ ọbụna usoro ntanetị - bido ugbu a. Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka, ụlọ ọrụ m ga-akụpịa ya maka gị. Anyị na-elekwasị anya na ọdịnaya mbụ nke na-eme ka ndị ahịa anyị dị ka ikike ma na-eme mgbanwe ha.
Tags: omume kacha mmandu nduọkachamarangwa ahiasaassaas akwụkwọ ọchaonye nnọchi anya ịre ahịangwaọrụ